Luis Villalon. Kubvunzana nemunyori weEl cielo sobre Alejandro | Zvazvino Zvinyorwa
Mifananidzo. Luis Villalon. Facebook nhoroondo.
Luis Villalon, kubva kuBarcelona kubva ku69, ndiye munyori we akati wandei kudzidzira nezveGirisi yekare senge Iyo Trojan Hondo kana Alexander pakupera kwenyika. Muna 2009 akaburitsa Hellenikon, basa rakakunda mubairo Hislibris kumunyori mutsva akanakisa wenhoroondo yenhoroondo. Yekupedzisira yakatumirwa ndeye Denga pamusoro paAlexander, achangosarudzwa semugumo wekupedzisira weiyo Hislibris mibairo, uye mune izvi indavhiyu Anotiudza nezvazvo uye nedzimwe nyaya dzakawanda. Ndinonyatsokoshesa nguva yako uye mutsa.
Kubvunzana naLuis Villalón
LUIS VILLALÓN: Yekutanga chaizvo, kwete. Ini ndinofungidzira zvaive zvimwe zvaidiwa kukoreji kana kuverenga chikoro chepamusoro: iyo Nhetembo yaMío Cid, Celestine…, Imwe yeiyo yaifanira kuve. Zvekuverengera mafaro, ndiko kuti, pasina chikoro kana kumanikidzwa nemunhu, ndinorangarira ndichiverenga semuenzaniso Estate, izvo best seller rakanyorwa naAlex Halley izvo zvakava zvemufashoni makore mazhinji apfuura uye izvo zvakaita kuti nhevedzano inyanye kuve nemukurumbira kupfuura bhuku. Ndinorangarirawo Muganhu webhuruu, iyo yaivewo nhepfenyuro yeterevhizheni. Handizive kana vaive vekutanga, asi vachange varipo.
Nyaya yekutanga yandakanyora? Pandakanga ndiri mugore rechitanhatu reESB ndakanyora (ndakadhirowa, zvirinani) a komiki nenyaya dzakasiyana siyana dzegamba izvo zvandakanyora. Iyo comic yaivewo nezvinokuvaraidza, nyaya uye zvakasiyana-siyana zvisina maturo; Ndakaigadzirira kavha ndikaisungira sebhuku. Mune inotevera kosi enyambo yakaenderera mberi, uye mune imwe zvakare. Ndichinazvo. Ndaifarirawo kunyora nhetembo, zvinyoronyoro uye zvine chinangwa chekunakidzwa. Ndinozvirangarira izvozvo panguva mauto Ndakafunga kunyora a bhuku reuzivi. Ini ndakanyora angangoita makumi matatu kana makumi mana mapeji.
LV: Ini ndinofunga paive nevaviri: It, naStephen King, akandirova nezvikonzero zviri pachena: nyaya yacho yaityisa, protagonists vaive vana vakazokura ... ini ndaive mudiki pandakaiverenga, pamwe ndaizove nemakore gumi nemashanu. Imwe yacho yaive Nyaya isingaperi, rakanyorwa naMichael Ende. Kufungidzira, VaKarl Konrad Koreander, Bastián Baltasar Bux, Atreyu, Fújur, Áuryn, Infant Empress, kudhinda kwemavara maviri-mavara, nyaya inodya imwe seChinhu chisingadye Kufungidzira ...
Pandakaiverenga, zvine musoro, iyo zvakawanda zvinyorwa zvengano izvo zvandakazodzidza kuti ndaive nazvo, uye dzimwe nguva ndinofunga zvekuzviverengazve nekuda kwechikonzero ichocho, kuzvitsvaga. Asi ini ndinotya kuzviita, kuti ndisakanganisa iyo yakanaka ndangariro yandinayo yebhuku.
LV: Hungu, ini handizive kana ndine chero, ini handifunge. Kupfuura vanyori, ini ndaizoti mabhuku andaifarira chaizvo. Pamakirasi, Oliver tendeuka kubva kuDickens, Mhosva uye Kurangwa naDostoevsky, Kuverenga kweMonte Cristo Dumas, mamwe maShakespearean madrama, Zvikomo zveWuthering naEmily Brontë, Jane eyre kubva kuna sisi vake Charlotte ...
Nevamwe vanyori vemazuva ano, mamwe maanoveli na Jose Carlos Somoza, ivo Javier Marias, Cormac McCarthy, John Williams ... ini ndichangobva kuwana Iris Murdock, munyori weIrish akafa makore 25 apfuura. Nhau dzake dzakanyanyisa uye dzinofanirwa kuverengerwa zvakadzikama, asi ini ndinoda: Gungwa, gungwa, Muchinda mutema, Mwanakomana wemashoko...
Ndakapedza makore akati wandei ndichiverenga nhoroondo dzenhoroondo, mhando yandinonyatsoda (kutaura zvazviri, kana ndiri munyori wechimwe chinhu, inhoroondo yenhoroondo). Ndichiri kuaverenga, hongu. Ini ndinoda vanyori vekare veiyo mhando: Robert Graves, Gisbert Haefs, Mika Waltari kana Mary Renault.
Asi kana nevanyori vandinoda vachireva vandaverenga zvakanyanya, saka ndinofanira kuenda ku ChiGiriki: Homer, Thucydides, Herodotus, Sophocles, Plato, Xenophon, Aristophanes… Zvese zvakatanga nemaGreek.
LV: Handizive, ini ndaizofanira kufunga nezvazvo. Zvinoitika kwandiri Tiglath Ashuri, protagonist we MuAsiriya y Nyeredzi yeropa, zvinyorwa naNicholas Guild. KANA Lario Turmo de The etruscannaMika Waltari; kana Bartleby de Bartleby, mabharaninaMelville. Kana zvakare Mendel, ivo Mendel wemabhukunaStephan Zweig.
LV: Ini handizvione sezvavanofarira, asi tsika izvo zvinondibatsira kutarisa. Pandinoverenga kana kunyora zvakajairika ndinoda kunyarara, kunyanya maererano nemazwi; kana ndikanzwa kutaura, ndinoramba ndichirasika uye handizive kwandinoenda. Kune vanhu vanokwanisa kuverenga pasi pemamiriro aya, asi kwete ini. Kazhinji Ndakaisa mimhanzi kunyora (kwete kuverenga), ipfupi kwazvo.
Ini ndinosarudza kare zvandinoda kunzwa, kazhinji nguva dzose mumhanzi wechiridzwa (Mike Oldfield, Michael Nyman, imwe nziyo, kana rwiyo chete rwandinoda), uye ini ndakariisa kuti rirambe richidzokororazve, muchiuno, kunge mantra. Ini ndakamboteerera kusingaperi kune rwiyo Inyika yakanaka zvakadii naLouis Armstrong, akafukidzwa nemuimbi wekuHawaii, kunyora nyaya inosetsa yevaGiriki, naSocrates naPlato vari pakati. Ndakakunda mumakwikwi enyaya naye.
LV: Dai ndaigona kusarudza ndaiti usiku, asi kazhinji ndaiverenga kana kunyora Pandinogona. Pane epuratifomu mapuratifomu (kunyangwe paine ruzha; ipapo ndinofanira kuverenga zvekare zvandaverenga kana kuongorora zvakanyorwa), panguva yekudya kwemasikati, masikati, ndiri pamubhedha ... Zvese zvinoenderana nenguva yauinayo.
AL: Chii chatinowana mune Denga pamusoro paAlexander?
LV: Zvakanaka, kunyangwe zvikaita neimwe nzira kubva kumusoro, watisingasangane naye, kana kusangana naye mudiki, ndiAlexander, Alexander Mukuru. Kune avo vasingazive kuti ndiani, Alexander aive mambo weMacedonia uyo aine makore makumi maviri nemaviri akaenda kundokunda hushe hwePersia uye mumakore gumi aive nenharaunda yaibva kumabvazuva kweMediterranean ichienda kuIndia uye rwizi rweDanube kuenda Gungwa Dzvuku. Kukunda kwake kwakachinja nyika zvachose. Asi inoverengeka haina va yekukunda ikoko, asi yematambudziko emumwe wevaGiriki vakaperekedza Alexander parwendo: mumwe OnesícritusZita rake raive rakaomarara sekuoma kwaro sezvo aibatanidzwa muhurongwa husingazivikanwe hwakarongedzwa wakakomberedza Mambo weMasedhonia.
Haisi nhoroondo yenhoroondo yekushandisa, mupfungwa yekuti, hongu, kune zviitiko, asi iyo yakajairika magamba haioneke izvo zvinowanzo fambidzana nemhando iyi, kana iyo yakareba yehondo zviitiko (kunyangwe paine hondo), kana iwo akanyanya kunaka kana akashata mavara. Muhupenyu hapana munhu mutema kana muchena, isu tese tiri vachena, uye ndizvo zviri mubhuku rino, kunyangwe hazvo yakaiswa mumamiriro kubva makore 2300 apfuura (pachokwadi, mumwe wevatambi anokwanisa "kuona ruvara "wevanhu). Ndinofunga inoverengeka ine poindi yekuseka kuti ndinovimba kuti mumwe munhu anobata, y zvakare kumwe kuratidzwa, nekuti vatambi vanopedza hupenyu hwavo vachiratidza kuguma kwavo.
AL: Chero mamwe marudzi aunoda kunze kweiyo enhoroondo?
LV: Kana paine chero chinhu ngano, asi chete kana izvo zvavanondiudza zvanyatsoomerera mungano. Kana zvinhu zvakawandisa zvikasanganiswa zvisina kundikwanira, kana kufungidzira kwakawanda kukandwa mukati mayo kupfuura ngano pachayo yatove kusanganisira, ini handigone kubatsira uye kusunungura. Ndinoda kuverenga uzivi, Ndinofungidzira kuti nekuda kwe (kana nekutenda ku) kudzidza degree iro. Pamberi, ndainyanya kufarira kuverenga magamba enyambo; Handizive kana izvo zvichikosha sehunhu.
LV: Ndine rondedzero naLuciano Canfora, mutori wenhoroondo weItaly uye philologist, anonzi Dambudziko rehutopia. Aristophanes anopesana naPlato. Ndinoifarira zvakanyanya. Iyo ndeimwe yemabhuku iwayo iwe aunoda kutsimbirira kana kutora zvinyorwa uye kukurudzira iwe kuti uverenge zvimwe zvinhu. Kana nyora, Ndine imwe nhoroondo yevaGiriki kubva pakutanga kwezana ramakore rechitanhatu BC. C. kuti tichaona kuti zvinopera zvakanaka here.
LV: Kune vanyori vazhinji, hongu, uye ini ndinozvibatanidza ini mupakeji. Zvakaoma kutsikisa bhuku, ndosaka zvichinetsa kuti chero munhu awane basa. pane zvakawanda zvekugovera, vanyori vakawanda, uye kudiwa kushoma. Vaparidzi vanoongorora uye havaisi panjodzi yekutsikisa mazita asingazivikanwe, kunyange chiri chokwadi kuti vamwe vanosarudza vanyori vatsva kana avo vari kutanga; asi zvekare dambudziko ndere kuwandisa. Iwe unogona kunyora zvirinani kana zvakanyanya, asi kazhinji rombo rakanaka iro rinotara kuti iwe uwane kuwana muparidzi anokutsikisa.
La desktop kutsikisa Iyo nzira yekubuda muchinetso: kana iwe usina muparidzi, iwe unozvishambadza uye unoona zvinoitika. Zvirinani, iko kurota kwekuona rako rakaburitswa bhuku rinenge ratove kuzadzikiswa. Uye zviripo, vaparidzi dzimwe nguva vanoenda kumatokisi akafanana neAmazon vachinotsvaga vanyori vakazvitsikisa uye vari kubudirira, kusaina. Marcos Chicot, wekupedzisira mubairo wePlaneta makore mashoma apfuura, kana Javier Castillo, kana David B. Gil, vaive nerombo rakanaka.
MF: Ini pachangu ndakaita rombo rakanaka; Mumamiriro ezvinhu emhuri yangu pakange pasina kutapuriranwa kwecovid, uye padanho rebasa ndakabatawo izvi rinenge gore ratange tiri tsime reropa. Asi zviri pachena kuti mamiriro acho akaoma, uye kuti vazhinji vari kuva nenguva yakaipa kwazvo, zvese zvehutano nebasa. Ndinofunga kuti kushaya kukwana kwenzvimbo kuziva, isu tiri zvakare kugumburwa pamusoro pebwe rimwechete kubva pakutanga kwedenda nekuda kwekushaikwa kwekuziva. Zvipatara zvakadonha nevarwere, makiriniki evarwere akafashukira nebasa ... Uye vazhinji vachiri kutora dambudziko iri zvakanyanya.
Kana ndikakwanisa kugara nechimwe chinhu chakanaka? Zvakanaka, sezvo tiri kutaura nezvemabhuku, Ini ndaigona kufara nekuti mu2020 ndakaburitsa Denga pamusoro paAlexander uye chimwe chinhu. Ndiri, hongu, asi ndinotya kuti ramangwana harina kusarudza gore rakanakisa kuve.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Literature » Hurukuro » Luis Villalon. Kubvunzana nemunyori weEl cielo sobre Alejandro